Etu ị ga - ahazi obere akpa gị: Ntuziaka ị ga - esi edobe akpa aka gị
Mee Karịa Seczọ Thechebe Akpa: Nzọụkwụ Nzọụkwụ Iji Decluterring Akpa Akpa Gị
Otu ọkachamara na-ahazi onwe ya na-ekwupụta na-arịa ọrịa Queen onye n'ezie…
Ana akwụkwọ ozi siri ike, ị ga-eji ịnụ okwu, 'Ezigbo akpa!' ebe ọ bụla ị na-aga. Louise Brooks otu ugboro kwuru, “Nwanyị nke ji ejiji dị mma, n'agbanyeghị na akpa ya adịghị ọcha, nwere ike imeri ụwa.” Kama nke ahụ, anyị ji n’aka na anyị na-emeri ụwa (Nwa nwanyị!) Mana akpa anyị adịghị adịkarị ka ọ nweghị ihe efu.
N’agbanyeghi ebumnuche anyị kacha mma, akpa nwere akpa nwere ike ịbụ ala mkpofu maka ihe ndị na - adịghị mkpa dịka nnata ozi ochie, mkpọchi na-egbu egbu, ụzọ atọ dị iche iche nke lipstick… ị na-akpọ ya ya! Bọọlụ akpa aka na onye nhazi.
Welie aka gị ma ọ bụrụ na ị nọrọla ihe yiri ka oge ndụ gị niile, na-achọ mkpịsị ugodi ụlọ gị. Welie aka gi elu ma oburu n’ị ghapu ihe ndị dị n’akpa gị iji chọta isi ekwe ntị gị (nke na-ejikọ akpị nkuchi gị mgbe niile). Ọ bụrụ na ị welie aka (ma ọ bụ abụọ), e mepụtara edemede a naanị maka gị.
Zute Mo, ụkọ gị na-agwụ ike
Nke ahụ bụ ebe m batara. Hi Style Ravens, Abụ m Mo, Onye Nhazi Ọkachamara nke bụ onye nomad zuru ụwa ọnụ. Mụ na di m na ụmụ nwaanyị abụọ mara mma bi. Mgbe m na-anaghị akọpu kichin ma ọ bụ ebe a na-ere mmiri, ị ga-ahụ ka m na-ege pọdkastị NPR n'oge m nwere ohere. Aga m na-ekerịta nhazi na ndụmọdụ nke ime ụlọ iji nyere aka bulie ụlọ gị na ebe ọrụ gị. Tụkwasịnụ m obi, kwenyere m n'okwu gị, ị gaghị enwe ohere ị ga-enwe ohere ọzọ. Ugbu a, ka anyị laghachi azụmaahịa.
Obere bụ More
Gbanyụọ, akpa na ihe ndabere: Ka anyị kpebie ikpebi ibu gị. Lkpagharị n'arụ dị arọ, dị ka nke mara mma ma dịkwa ụtọ, nwere ike ịdakwasị ahụ gị - na - enye aka na mgbu mgbu na olu. Na mgbakwunye, ọtụtụ ihe na-atụgharị na akpa nwere ike ịgbasa ihe ahụ ma weta oge na akwa akwa n'oge. N’ikpeazụ, akpa a na-ebufe oke nwere ike ime ka ụjọ ghara ịdị n’ịgbagharị gburugburu iji chọta kaadị debit gị n’ahịrị ndenye ọpụpụ. Bọọlụ akpa aka na onye nhazi.
… Mana ihe agaghị adị otu a, aga m egosi gị otu ị ga - esi dozie akpa akpa gị, wee bepu ngwongwo na-enweghị isi.
Nke a bụ usoro enweghị 5 nrụgide iji tufuo akpa akpa aka ...
# 1. Wepu ya nile
Dị ka oge niile, ihe mbụ ị ga - eme mgbe ị na - ahazi bụ ịmebisị ihe. Wepụ ihe niile dị n’akpa uwe gị were debe ha n’elu mbadamba. Tụgharịa obere akpa ahụ n'ime (karịa ihe nwere obere ahịhịa) iji kpochapụ obere obere pesky na njedebe ị ga-ahụ na ala. Nwere ike ihichapụ stains ma ọ bụrụ na ị chọpụta ihe ọ bụla mana jide n'aka na ị ga-agbaso ntuziaka onye na-emepụta nhicha.
# 2. Ikewapụ ihe site na otu
Onye ọ bụla nwere usoro nhazi nke ya, yabụ otu esi edozi ihe gị bụ kpamkpam nye gị. Zọ kachasị mfe bụ ikpokọta ihe ndị yiri ya. Ìgwè dị iche iche nwere ike ịgụnye etemeete, ngwaahịa nwanyị, ngwa elektrọn, ihe dị iche iche, na ikpo ahịhịa.
# 3. Tọdachi, weezie
Nzọụkwụ ọzọ bụ ikpofu ahịhịa (ma eleghị anya ị gaghị eji klọọkụ anọ ahụ ọnwa anọ, agbanyeghị). Ugbu a, gafere akụkụ ndị ọzọ ma dezie ya, na-ewere ihe ị na-achọghị ka iwere gị ebe niile. Ndị a, ị nwere ike ịpụ n'ụlọ. Bọọlụ akpa aka na onye nhazi.
# 4. Gbakọọ
Stay nọrọ na nhazi, kompeni, nwegasịa, kọwaa komputa! Hazie ihe foduru n’akpa akpa gị ma ọ bụ n’akpa na arịa dị iche iche (nke na-egbute ya, ka mma). Ọ bụrụ na ịchọghị ịghasa onye nhazi akpa, ị nwere ike gaa n'ihu were ihe ị nwere iji dozie ihe gị.
Nke a bụ otu esi ahazi ihe site n'ụdị akpa gị…
Akwụkwọ: Tụlee ịchekwa ngwongwo mpempe akwụkwọ na-adịghị mkpa na kaadị obere ihe. Were usoro a site na ịhazi ha n'ụzọ mkpụrụedemede, site na otu (uwe, mma, ma ọ bụ ngwa ahịa) ma ọ bụ ụdị (dere, nnata, kaadị ntụkwasị obi, nnata onyinye). Ime nke a ga - eme ka ị hụ ihe ịchọrọ mgbe ịchọrọ ya.
Agbakwunye agbakwunyere: besties gị ga-eche na ị bụ onye ahaziri ahazi ha. Gbalịa ka ị na-agafe na folda ahụ ugboro ugboro iji kpochapụ kaadị na nnata. Ọzọkwa, tulee ịtụgharị kaadị ntụkwasị obi gị n'ụdị ngwa iji zere iburu ha ebe niile. Bọọlụ akpa aka na onye nhazi.
Kaadị azụmahịa: Iji mee ka ibu gị ghara ịna-enwu, na-echekwa naanị kaadị azụmaahịa dị mkpa na onye nwe kaadị ma hapụ nke ọzọ n'ụlọ. I nwekwara ike ime nke a maka kaadị ndị ọzọ adịghị mkpa ị kwesịrị iburu - na-echekwa ha n'ọnọdụ siri ike (ọrụ Mint na-arụ ọrụ) ka ha wee ghara ịdị na-emebi. Echiche dị mma bụ ị scanomi ma bulite kaadị azụmaahịa ozugbo ị nwetara ha ma kpochapụ ụdị akwụkwọ.
Loose Change: Nweta nwatakịrị nwanyị ahụ, ma chebe ya na obere akpa gị ma ọ bụ na obere akpa ego. Ọ bụrụ na mkpụrụ ego amalitela ịta ahụ, were obere, ma hapụ nke fọdụrụ n'ụlọ ma ọ bụ n'ụgbọala gị.
NJ na kaadị Debit: Maka kaadị dị mkpa na nke ị na-ejikarị dị ka ID, ikikere, na kaadị debit, tụlee ịhazi ha na obere akpa ka ị nwee ike ịchọta ha n'oge ọ bụla. You nwere ike ịhọrọ ụzọ dị mfe, na-ele anya dị mfe, nke nwere akụkụ, yabụ oge ọ bụla ịchọrọ iji wepụta kaadị, ị nwere ike ịhụ ihe niile na nlele.
Ngwa ọsọ: Detuo nnomi nke NJ gị ma debe ndị a n'ụlọ ma ọ bụrụ na obere akpa gị furu ma ọ bụ zuru. Bọọlụ akpa aka na onye nhazi.
Techaa: Chekwaa ihe ndozi gi na ihe ntutu gi na pouches iche ma buru naanị ihe di nkpa. Idobe ihe ịchọ mma gị niile n'otu ebe ga - eme ka ime akpa akpa gị gharazie isi, mana ka ọ dịrị gị mfe ịchọta.
Igwe: All gbagọrọ agbagọ? Debe ekweisi na chaja ndị ahụ n'ọnọdụ siri ike ma ọ bụ obere akpa. Kechie eriri ekike ma ọ bụ eriri na-agbanwe gburugburu ka eriri ghara ịbanye na ya, ị dịkwa mma ịga.
Ihe ndi iche iche: Ga-enwe ihe ndị dị mkpa ga-adị n’akpa gị (chee echiche n’aka lotion, obere akwụkwọ ndetu, wdg). Gbalịa itinye ihe ndị a n'otu akwa na akwa, kama ịhapụ ka ha tụgharịa na akpa aka gị.
Ngwa ọsọ: Mee obere ngbanwe nke ga-eme ka ndụ gị dịkwuo mfe dịka ịkọwa nri gị na ísì ụtọ gị n’ime karama ndị njem.
Ihe A Na-ejikarị: Nke ikpeazu mana nke anaghị eji, dị ka ugogbe anya gị, mkpịsị ugodi, ekwentị gị na ihe ị ga - eji aka gị rụọ, nwere ike nọrọ ebe echepụtara ma dịkwa mfe iru ebe dị n'ime akpa gị ma ọ bụ na mpụga nke akpa gị ka ị ghara ịdị na-eche ebe ihe achọrọ gị. tinye ha ozo.
Y’oburu n’inwe ime njem ngwa ngwa banye n’ụlọ ebe a na-ere ahịa ma ọ bụ naanị ịga ije, tinye obere akpa, ekwentị na igodo n’ime obere akpa aka N'ụzọ nke a, ịgaghị ewere obere akpa gị dum ma nwee ike ịnwere aka gị ime ihe ndị ọzọ.
# 5. Mmezi - jisie ike na-arụ ọrụ!
Ugbu a haziri ihe ndị dị n’ime akpa gị, ị ga-edobe ya! Iji zere ihe ọgbụgba, tinye ihe na akpa ha ma ọ bụ pouches ozugbo emere gị, wee kpochapụ ihe ọchị niile na njedebe nke ụbọchị mgbe ị ruru n'ụlọ.
Kpachapụ obere akpa gị mgbe ị na-akwado maka izu iji debe ọ bụghị naanị ihe gị kamakwa uche gị n'usoro.
Na mmechi, guzogide onwunwa iburu n’igwe ihe nlere (i nwere ike ime ya!). Ndị obere ngwugwu ndị ahụ na-ejedebe na ala akpa gị, na-emepụta ọgbaghara ma mebie ọrụ siri ike gị.
Ugbu a ị bụ onye na - ahazi obere akpa ego, gaa n'ihu mee ihe ndị a oge ọ bụla ị gbanwere akpa. Gaa n'ihu… jiri nwayọ na-eyi ihe dị mma - ma n’ime ma n’èzí. Bọọlụ akpa aka na onye nhazi.
Yabụ kedu ihe ị chere. Gbalịsie ike ịkekọrịta na ngalaba nkọwa n'okpuru.
Maka ndụmọdụ ndị bara uru karị, gaa na peeji Instagram m site na njikọ dị na bio dị n'okpuru.
Tichaa Nchekwa mkpuchi akwa gị 7 Nzọụkwụ Dị Mfe
Ntu gi nwere ike mebi nbido n’iru: 5 Manicure na ele anya iji zere n’ime ulo oru
nzukọ aka otu esi ahazi obere akpa otu esi ahazi akpa aka gi nzukọ pọọsụ
Otu onye na - ahazi ọrụ ọkachamara na onye na - ekwupụta onwe ya bụ Dislutter Queen onye kwenyesiri ike na ihe niile kwere omume na kọfị na lipstick red. Na Style Rave, anyị bu n’obi gbaa ndị na-agụ akwụkwọ anyị ume site n’inye anyị ọdịnaya na-eme ọ bụghị naanị na-atụrụ ndụ kama ka ha gwa gị ma gbaa gị ume ka ị na-ASPIRE ka ị nwekwuo nka, na-ebi ndụ karị ma nwee ahụike. Soro anyị na Instagram @StyleRave_ ♥
Rave News Digest: Toolz & Tunde Demuren Na-atụ Anya Numbermụ nke Abụọ, Joe Biden na-ekwe nkwa ijeri mmadụ maka ịha nhata ịkpa ókè agbụrụ, Sanchez + More